5-muuqaal oo ay isku mid ka yihiin filimada Sanjay Bhansali horey u sameeyay iyo Padmaavat (+sawiro) – Filimside.net
5-muuqaal oo ay isku mid ka yihiin filimada Sanjay Bhansali horey u sameeyay iyo Padmaavat (+sawiro)
Director Sanjay Leela Bhansali filimkiisa Padmaavat ee tiyaatarada la saaray 25 Janaayo 2018 wuxuu noqday Blockbuster suuqyada caalamka halka gudaha Hindiya uu Super Hit ka noqday welina darajada Blockbuster uu gaari karo madaama uu ganacsi adag sameenayo.
Hadaba waxaa dabagal lagu sameeyay filim sameeye Bhansali filimada uu horey u sameeyay iyo midkiisa cusub Padmaavat muuqaalo ama dhacdooyin ay isku mid yihiin.
Fadlan hoos kaga bogo 5-muuqaal oo Padmaavat ku jiraan kuwaas oo horey loogu soo bandhigay Director Sanjay Bhansali filimadiisii hore:
Shahid Kapoor muuqaalkiisa Padmaavat marada cad u xiran murqahana u dhisan yihiin waa mid horey Ranveer Singh ugu soo bandhigay filimkii Ram Leela.
Ranveer heeska Khalibali ee filimka Padmaavat kusoo bandhigay muuqaal ahaan waxay u egtahay heeskii ‘Malhaari’ ee filimka Bajirao Mastani uu ka qaaday.
Deepika Padukone heeskeesa Ghoomar ee Padmaavat ku jirto waxay u egtahay muuqaal ahaan heeskii Deewani Mastani ee filimka Bajirao Mastani ka qaaday.
Muuqaal Dhamaadka Filimka Padmaavat wuxuu shabahaa qaabka uu filimka Devdas ku dhamaanayo, inkastoo labada dhacdo filimada ku kala dhamaanayaan aad u kala duwan, laakiin oroda Deepika dhamaadka sameeneyso marka ay dadba isku rideyso iyo orodkii Aishwarya Rai filimka Devdas waa mid la isku soo qaban karo qaabka loo sameeyay.
Guubaabada Hadalada Ku Dheehan: Ranveer Singh doorkiisa Khilji sida uu ciidamadiisa goobta dagaalka ugu guubaaninaayo iyo hadalada uu adeegsanayo waa mid in badan shabaho doorkiisii filimka Bajirao Mastani marka goobta dagaalka la joogo hadalada uu adeegsanayo.
Waxaa Aqrisay 1,025